သင်္ချိုင်းကုန်းအနီးတွေ့ရှိသောအမျိုးသားကို ခေါ်ယူမေးမြန်းရာမှ ဘင်္ဂါလီ ၂ ဦးနှင့်ပို့ဆောင်ပေးသူကို ဖမ်းဆီးရမိ | Akonthi
သင်္ချိုင်းကုန်းအနီးတွေ့ရှိသောအမျိုးသားကို ခေါ်ယူမေးမြန်းရာမှ ဘင်္ဂါလီ ၂ ဦးနှင့်ပို့ဆောင်ပေးသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် တရားရုံးထုတ်ပြန်လာသည့်ရဲတပ်သားများက သင်္ချိုင်းကုန်းအနီးတွေ့ရှိသော အမျိုးသားကို ခေါ်ယူမေးမြန်းရာမှ ဘင်္ဂါလီ ၂ ဦးနှင့်ပို့ဆောင်ပေးသူတို့ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဥသျှစ်ပင်နယ်မြေရဲစခန်းကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ကျီးပင်လှုပ်ရှားရဲကင်းမှ ရဲတပ်သား ကျော်ရဲသူနှင့် ရဲတပ်သားဇင်လင်းကိုတို့သည် ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ ညနေ ၄ နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့်က ပန်းတောင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှ ရုံးထုတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်၍ ရဲကင်းသို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုစဉ် ညနေ ၆ နာရီ ၅၀ မိနစ်ခန့်၌ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ရပ်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘူးဘက်ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်-မုံရွာ ကားလမ်းဘေး သင်္ချိုင်းကုန်းအနီးအရောက်တွင် မသင်္ကာဖွယ်ရာအမျိုးသားတစ်ဦးအား တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် မေးမြန်းရာ ၄င်းအမျိုးသားမှာ ဟာမေဒူရာမန်(ခ)သိန်းထွန်း၊ (၂၅)နှစ်၊ ဘင်္ဂါလီ/အစ္စလာမ်၊ ရတနာပုံ အလယ်ကျေးရွာ၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နေသူဖြစ်ပြီး မသင်္ကာသဖြင့် ဥသျှစ်ပင် နယ်မြေရဲစခန်းသို့ စစ်ဆေးရန်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားစဉ် ယာဉ်အမှတ်၊ MDY HSE/…. နံပါတ်ပါ Caldina(ခဲရောင်) (လိုင်စင်-စိစစ်ဆဲ) ခဲရောင်ယာဉ်မှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကံမမြို့ဘက်သို့ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း မသင်္ကာဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရ၍ ကျီးပင်လှုပ်ရှားရဲကင်းမှ ဒုရဲအုပ်ဇော်မိုးဦးစီးအဖွဲ့မှ လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာ ည ၈ နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့်တွင် အဆိုပါယာဉ်ကို ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပုသိမ်- မုံရွာကားလမ်း မိုင်တိုင်၊ ၁၇၃/၃ နှင့် ၄ အကြားတွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် အဆိုပါယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ရန်ပိုင်စိုး(ခ)ရန်နိုင်၊ (၂၉)နှစ်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနေသူကို ယာဉ်နှင့်မလှမ်းမကမ်း လယ်ကွက်အတွင်းမှ တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဟာမေဒူရာမန်(ခ)သိန်းထွန်းကို စစ်မေးချက်အရ ၄င်းနှင့်အတူ ဖိုင်ဇိုလာ၊ (၃၂)နှစ်၊ ဘင်္ဂါလီ/ အစ္စလာမ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နေသူပါရှိပြီး ထိုသူမှာထွက်ပြေးနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ဥသျှစ်ပင်နယ်မြေရဲစခန်းမှ လိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲခန့်တွင် ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊ မြေ၀ါကုန်းကျေးရွာအနီး ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်းဘေးတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ဟာမေဒူရာမန်(ခ)သိန်းထွန်း၊ ဖိုင်ဇိုလာနှင့် ယာဉ်မောင်း ရန်ပိုင်စိုး(ခ)ရန်နိုင်တို့ ကို ဥသျှစ်ပင်နယ်မြေရဲစခန်းတွင် ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးစီးအဖွဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
- နိုင်မင်းလွင်(အကုန်သိသတင်းဌာန) | ဓာတ်ပုံ- Bago Regional Police Force
ပနျးတောငျးမွို့နယျတှငျ တရားရုံးထုတျပွနျလာသညျ့ရဲတပျသားမြားက သင်ျခြိုငျးကုနျးအနီးတှရှေိ့သော အမြိုးသားကို ချေါယူမေးမွနျးရာမှ ဘင်ျဂါလီ ၂ ဦးနှငျ့ပို့ဆောငျပေးသူတို့ကို ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျခရိုငျ၊ ပနျးတောငျးမွို့နယျ၊ ဥသြှဈပငျနယျမွရေဲစခနျးကှပျကဲမှုအောကျရှိ ကြီးပငျလှုပျရှားရဲကငျးမှ ရဲတပျသား ကြျောရဲသူနှငျ့ ရဲတပျသားဇငျလငျးကိုတို့သညျ ဇှနျလ ၁၁ ရကျ၊ ညနေ ၄ နာရီ ၄၀ မိနဈခနျ့က ပနျးတောငျးမွို့နယျတရားရုံးမှ ရုံးထုတျတာဝနျထမျးဆောငျ၍ ရဲကငျးသို့ ပွနျလာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ထိုစဉျ ညနေ ၆ နာရီ ၅၀ မိနဈခနျ့၌ ပနျးတောငျးမွို့နယျ၊ ရပျသာကြေးရှာအုပျစု၊ ဘူးဘကျကြေးရှာ၊ ပုသိမျ-မုံရှာ ကားလမျးဘေး သင်ျခြိုငျးကုနျးအနီးအရောကျတှငျ မသင်ျကာဖှယျရာအမြိုးသားတဈဦးအား တှရှေိ့ခဲ့သဖွငျ့ မေးမွနျးရာ ၎င်းငျးအမြိုးသားမှာ ဟာမဒေူရာမနျ(ခ)သိနျးထှနျး၊ (၂၅)နှဈ၊ ဘင်ျဂါလီ/အစ်စလာမျ၊ ရတနာပုံ အလယျကြေးရှာ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ ရခိုငျပွညျနယျနသေူဖွဈပွီး မသင်ျကာသဖွငျ့ ဥသြှဈပငျ နယျမွရေဲစခနျးသို့ စဈဆေးရနျချေါဆောငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျးသို့ချေါဆောငျသှားစဉျ ယာဉျအမှတျ၊ MDY HSE/…. နံပါတျပါ Caldina(ခဲရောငျ) (လိုငျစငျ-စိစဈဆဲ) ခဲရောငျယာဉျမှာ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကံမမွို့ဘကျသို့ မောငျးနှငျထှကျပွေးသှားခဲ့ကွောငျး မသင်ျကာဖှယျရာ တှရှေိ့ရ၍ ကြီးပငျလှုပျရှားရဲကငျးမှ ဒုရဲအုပျဇျောမိုးဦးစီးအဖှဲ့မှ လိုကျလံရှာဖှခေဲ့ရာ ည ၈ နာရီ ၄၀ မိနဈခနျ့တှငျ အဆိုပါယာဉျကို ပနျးတောငျးမွို့နယျ၊ ပုသိမျ- မုံရှာကားလမျး မိုငျတိုငျ၊ ၁၇၃/၃ နှငျ့ ၄ အကွားတှငျ တှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ထို့နောကျ အဆိုပါယာဉျမောငျးဖွဈသူ ရနျပိုငျစိုး(ခ)ရနျနိုငျ၊ (၂၉)နှဈ၊ ဗမာ/ဗုဒ်ဓ၊ ပနျးဘဲတနျးရပျကှကျ၊ ဟင်ျသာတမွို့၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးနသေူကို ယာဉျနှငျ့မလှမျးမကမျး လယျကှကျအတှငျးမှ တှရှေိ့ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖမျးဆီးရမိသညျ့ ဟာမဒေူရာမနျ(ခ)သိနျးထှနျးကို စဈမေးခကျြအရ ၎င်းငျးနှငျ့အတူ ဖိုငျဇိုလာ၊ (၃၂)နှဈ၊ ဘင်ျဂါလီ/ အစ်စလာမျ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ ရခိုငျပွညျနယျနသေူပါရှိပွီး ထိုသူမှာထှကျပွေးနကွေောငျး သိရှိရသဖွငျ့ ဥသြှဈပငျနယျမွရေဲစခနျးမှ လိုကျလံရှာဖှဖေမျးဆီးခဲ့ရာ ဇှနျလ ၁၂ ရကျ၊ နံနကျ ၁၀ နာရီခှဲခနျ့တှငျ ပနျးတောငျး မွို့နယျ၊ မွဝေါကုနျးကြေးရှာအနီး ပုသိမျ-မုံရှာကားလမျးဘေးတှငျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖမျးဆီးရမိသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုး ဟာမဒေူရာမနျ(ခ)သိနျးထှနျး၊ ဖိုငျဇိုလာနှငျ့ ယာဉျမောငျး ရနျပိုငျစိုး(ခ)ရနျနိုငျတို့ ကို ဥသြှဈပငျနယျမွရေဲစခနျးတှငျ ပနျးတောငျးမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ဦးစီးအဖှဲ့ပူးပေါငျးအဖှဲ့မှ စဈဆေးနကွေောငျး သိရသညျ။
- နိုငျမငျးလှငျ(အကုနျသိသတငျးဌာန) | ဓာတျပုံ- Bago Regional Police Force